नेपालमा पहिलो काेराेना खोप सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाए « News24 : Premium News Channel
नेपालमा पहिलो काेराेना खोप सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाए
काठमाडाैं, १४ माघ । नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरू भएको छ । नेपालमा पहिलो ‘कोभिशिल्ड’ खोप काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाउनु भएको छ ।
त्यस्तै अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्तोलाले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुभएकाे छ । उहाँले खोप लगाएपछि खुशी लागेको उहाँहरूले बताउनुभयो । राजभण्डारीले भन्नुभयाे, ‘यो पनि इन्फ्लुएन्जा खोप जस्तै हो । डराउनुपर्ने कुरा छैन । त्यसैले खोप लगाउनु पूर्व पनि र लगाएपछि खुशी नै छु। स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैले उत्साहित भएर खोप लगाउनुहोस् भन्न चाहन्छु ।’